Blender 2.91 inouya nerutsigiro rwekuveza zvipfeko uye zvimwe zvekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Kwangopfuura chete mwedzi wapfuura, Blender akaburitsa iyo v2.90 ye software yako, chakanyanya kukosha kugadzirisa chakaburitsa zvinhu zvitsva senge Embre, kubva kuIntel uye yakavhurwa sosi, yakatanga kushandiswa kutsvaga ray paCPU, iyo yakavandudza mashandiro. Maawa mashoma apfuura vakaburitsa yechina yekuvandudza ya2021, a Blender 2.91 iyo yakauya nenhau, asiwo kugadzirisa ruzivo rwevashandisi uye kushandiswa kweiyi 3D modelling software.
Paunongopinda iyo kusunungura chinyorwa yeBlender 2.91, isu tinogona kutoona yekutanga inonakidza ruzivo: vaunza chishandiso icho iwe chaunogona kuveza kana kufambisa mbatya, chinonyanya kushamisa kana chikaonekwa kupfuura chinotsanangurwa mumazwi. Pazasi iwe une rondedzero nenhau dzakatanhamara ayo asvika neino yazvino kuvandudzwa kwe2021.
Pfungwa dzeBlender 2.91
Nyowani yekurovera chishandiso chekuveza zvipfeko. Iye zvino unogona kuveza nekukurumidza. Iyo nyowani Sculpt Cutter chishandiso ikozvino inokutendera iwe kuti uteme uye kunyange kuwedzera geometry uchishandisa bhokisi uye lasso zvimiro.
Nyowani Chaiyo Solver chishandiso chekubata neyakaomarara geometry.
Zvinyorwa uye zvakavezwa zvinhu zvino zvinotsigira tsika tsika bevel, sezvinoita iyo bevel modifier. Mhando dzese dzevelvel ikozvino dzinotsigirawo zvakapetwa zvakapetwa ngowani
Nyowani modifier yehuwandu hwezvinhu izvo zvinobvumidza zvine simba kuzvishandura kuita ruzha kana chimwe chinhu chakashata, chakanakira mvura. Iyo zvakare inobvumidza iyo yekumashure nzira.
Kugona kushandura mifananidzo kuita Grease Penzura zvinhu nekungodzvanya kamwe chete.
Nyowani Holdout sarudzo mumidziyo yekupenda maburi ebrashestroke nenzvimbo dzakazadzwa.
Kutsvaga kutsva kuti uwane marongero.
Rutsigiro rutsva rwemakomponi echimiro chakabonderana zvinogonesa kuenzanisa kwakaomarara kwanga kusingaite kare Akawanda echinyakare maumbirwo anogona ikozvino kusanganisirwa kuita imwechete concave chimiro, zvichikonzera mukushamisa nekukurumidza simulations
Mikana yekumaka kuunganidzwa mumavara.
Hupenyu hwemakoto zvino inogona kuve yakanyanya kuwanda, ichibvumira kuti dzimwe shanduko dzinoerekana dzaita mashoma mafirama anodiwa.
Proxy zvinhu zvinogona kushandurwa kuita imwechete-kubaya kupfuura.
Mutsva wekubuda simba muPrinciped BSDF shader.
Zvirinani alpha kusanganisa mune iyo Mhariri Mifananidzo.
Kuwedzeredza maCycle kunoverenga chishandiso kubva kumutsara wekuraira.
Brown-Conrady modhi yekumonyanisa inoitwa.
Yekukurumidza vhidhiyo encoding / kududzira.
Inotsigira yakachena emitting mavara mune iyo mufananidzo mupepeti.
Kugona kubvisa uye kubatanidzazve kudarika.
Python API kugadzirisa.
Iye zvino unogona kudzora kutsetseka kwemwaranzi yeVV mune Zvaunofarira.
Yakagadziriswa mashandiro muUV / Image Mhariri.
Ikozvino inotsigira kuisa zvinhu muIDProp-based RNA kuunganidzwa kunotsanangurwa ne py.
Motion kuburitsa kupa kweAlembic mafaera (macircule).
Blender Kit: Kufambira mberi kwebvudzi uye mabhora akaomarara.
Chiitiko Ray Cast shanduko.
Blender 2.91 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune webhusaiti yemunyori, iyo inogona kuwanikwa kubva Iyi link. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha tarball, saka inogona kunge iri sarudzo iri nani yekuisa iyo Snap vhezheni (sudo snap yekuisa blender -classic) kana, kunyangwe zvirinani kubva pakuona kwemunyori wenyaya ino, iyo Flatpak vhezheni, inowanikwa pa Flathub. Vaya vanosarudza kushandisa zvinyorwa zvepamutemo zvekushambadzira kwavo kweLinux vachazofanira kumirira mazuva (kana kunyangwe mavhiki kana mwedzi) kuti vakwanise kutora mukana wenhau dzese muBlender 2.91.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Blender 2.91 inosvika nerutsigiro rwekuveza zvipfeko uye zvimwe zvekuvandudza